Rosia: Resa-pinoana & Famonoana Ny Masoivoho Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2012 21:08 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Français, Italiano, English
Marobe ireo trano famoaham-baovao no manindry mafy ny fifandraisan'ireny herisetra manohitra Amerikana ireny sy ny fanohanan'ny Amerikana ny Lohataona Arabo. Ho fanombànana ny maha-ara-drariny ny rà vao latsaka teo, maro ireo bilaogera ao amin'ny RuNet no nanontany teny momba izay azo hanamarinana “valifaty” feno herisetra atao amin'ny fahalalahana ara-pinoana an'ny Tandrefana.
Evgeny Schultz, bilaogera, no niezaka nametraka ho anaty vanimù-potoana ny zava-nitranga tato ho ato tany Afovoany Atsinanana, ao anatin'ny firongatry ny resa-pinoana any Rosia, ao anatinà lahatsoratra iray nomena lohateny hoe [ru], “Ny Làlan'ny Finoana : Ao Libya sy Russia” :
Tsotra hatrany ny fanazavana : “Ilàna finoana, Andriamanitra izany.” […] Hitarin-dry zareo ny maha-mahay ny zavatra rehetra an'Andriamanitra, ny hatsarany, ary ny maha-mahefa ny zavatra rehetra azy ho tonga hatrany amin'ireo mpitarika an-dry zareo ara-pivavahana. Ary, mandeha ho azy, tsy mihevitra ny hamela ity fotoana ity handalo azy ireo fotsiny mihitsy akory ireo manam-pahefana. Ho an'ireo manam-pahefana, ny finoana no fanoitra matanjaka indrindra ho an'ny fifidianana. Saingy tsy vitan'ireo manam-pahefana ny hahatakatra hoe tsy ho voafehin'izy ireo io fanoitra io. Na ho haingana na ho ela hiantefa eny an-tampon-kandrin-dry zareo io — ary miaraka amin-dry zareo koa ny Rosiana rehetra. Tsy misy paipaika ahitana tombony mihitsy afaka manamarina ny tetikady tsy mitondra mankaiza izoran'ny fampidirana ny resaka ara-pivavahana.
J. Christopher Stevens, ambasadaoron'i Etazonia tao Libya nanomboka ny 7 Jona 2012 mandra-pamonon'ny sasany azy tamin'ny fanafihana ny kaonsily Amerikana tao Benghazi ny 12 Septambra 2012 (sary nalaina tamin'ny 23 Aprily 2012), sary avy amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana, azon'ny rehetra ampiasaina.
Ny ahiahin'i Schultz, raha izay no azo ilazàna azy, dia tsy azo namaritana ny fihetsehampon'ireo rehetra mpikirakira aterineto. Ilay Orthodox hiringiriny, mpitondra fivavahana sady mpanoratra bilaogy, Sergey Zhuravlev, ohatra, dia nampakatra [ru] fanakianana mivaivay mamely ny Silamo ho setrin'ireo fanafihana tselatra natao ireo Maosivoho Amerikana.
Ao amin'ny Twitter, naneho ny tsy fahatokisany ny sasany mikasika ny tsy mampahomby ny herisetra ho valinkafatra aminà votoaty mety hanohintohina tsindraindray eny.
Ao Bakou, Azerbaijan, Rahman Haji nanoratra hoe :
Sarimihetsika mitapitapy iray mikasika ny Mpaminany dia efa nahatonga ny antsasak'izao tontolo izao ho ambony ambany. Nisi namono ny Ambasadaoro [Amerikana] tany Libya, dia nongotana ny sainam-pirenena Amerikana teny amin'ireo Masoivoho nanerana ny faritra Afovoany Atsinanana. Manahikoriko tsotra izao…
Avy any Chelyabinsk, Sergei Tretyakov nibitsika hoe:
Ny eson'ny androany: ireo Libiana Miozolmana dia nahita lahatsary tananty aterineto mikasika ny hoe olona tsy tia fandriampahalena any Miozolmana, ary dia tezitra ry zareo ka namono ny masoivoho Amerikana tany Lybia.
Somary manjavozavo ihany ny fanehoan-kevitry ny hafa. Tany Tula, ohatra, i Gregory Bukreev nampifandray [ru] ny hatezerana lazaina fa natosiky ny lahatsary iray manivaiva ny Miozolmana tamin'ny tranga Pussy Riot
Tany Libya, novonoina ny masoivohon'i Etazonia noho ny lahatsary iray nanambany ny Mpaminany Mohammed. Ireo sisa mpikambana ao amin'ny Pussy Riot sisa tsy voatàna am-ponja dia manomana hetsika vaovao iray. Saintsaino ny momba izay.
Ka inona marina izany no tokony “hosaintsainin”‘ny olona e ? Ireo bilaogera dia miray feo amin'ny fanoherana ny hetsika feno herisetra atao amin'ireo vahiny manan-kaja Amerikana, nefa olana iray mahavaka ny saina dia ny adin'i Rosia manokana amin'ny hamaroan'ny antokom-pinoana, ahitàna ao anatin'izany ireo olana toy ny firongatry ny ‘extremisme’ Miozolmana na Ortodoksa avy ao anatiny ihany. Ny fiakaran'ny dindon'ny fiangonana Ortodoxa, mazava loatra, dia nisy ary mitoetra ho olana iray goavana ho an'ireo tampom-pahalalàna manaraka tsara ny resabe momba ny Pussy Riot.